(သူမ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » (သူမ)	26
Posted by lady finger on Dec 10, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 26 comments
သူမ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ထွက်သာလာရတယ် ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်းမသိ။ ရန်ကုန်မြို့က သူမအတွက်ကျဉ်းလွန်းနေသလိုပင်။ လမ်းလျှောက်ရင်း သွားစရာနေရာကို အလျှင် အမြန် စဉ်းစားနေရသည်။ သူငယ်ချင်းတွေအိမ်လည်း မသွားချင်။ သူမ အိမ်တွင်းရေးကို သူငယ်ချင်းတွေမသိစေလို။ သူတို့ထင်နေသလို ကံကောင်းသော ပျော်စရာကောင်းသော မိသားစုရှိသူအဖြစ် ဆက်ထင်နေစေချင်သည်။ တကယ့်တကယ် ည ၈နာရီကျော်ဆိုတာ နောက်ကျသော အချိန်မဟုတ်ပေမယ့် အသက် ၃၀ ကျော် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးအတွက် သွားစရာနေရာရှားပါးလှပေသည်။
ယောင်တောင်ပေါင်တောင်ဖြစ်နေသော သူမကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်သွားသော လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ အကြည့်ကိုလည်း မခံလို။ ပါးစပ်သရမ်းသူတို့၏ မကြားတကြားပြောသံလည်း မကြားချင်ပေ။ နေ့လည်ဆိုလည်းကောင်းသား၊ shopping ထွက်ရင်း beauty spa မှာ ခေါင်းလျှော်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးစေလိုက်မည်။ ကားမောင်းသင်ပေးမည်ဟု သူပြောတုန်းက မသင်လိုက်မိတာမှားပြီ။ အနည်းဆုံးတော့ ကားလျှောက်မောင်းနေလျှင် ဒီလောက် ယောင်ချာချာဖြစ်မည် မထင်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထူထဲကျပ်ညပ်သော ယာဉ်ကြောနဲ့ လိုင်းကားကြီးများရဲ့ စည်းကမ်းမရှိ မောင်းနှင်မှုတို့ကြောင့် ကားမောင်းရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သော သူမရဲ့ ပျော့ညံ့မှုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသထွက်မိသည်။
ကြံရာမရသည့်အဆုံး ပိတ်ချိန်နီးနေပြီဖြစ်သော coffee ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ coffee ကို အချိန်ဆွဲသောက်ရင်း ဖုန်းကို silent လုပ်ကာ screen ကို စိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ သူပြန်ေ၇ာက်တဲ့အချိန်မှာ သူမအိမ်မှာရှိမနေချင်။ သူအိမ်ပြန်နောက်ကျလျှင် သူမအိမ်မှာ စိတ်ပူကာ တမျှော်မျှော်လုပ်နေရသလို သူ့ကိုဖြစ်စေချင်သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဘယ်တွေသွားနေတာလဲမေးရင် ဒီလိုပဲပေါ့ ရှင်လည်းသွားချင်တဲ့နေရာသွား ပြန်ချင်တဲ့အချိန်မှပြန်တာ ကျွန်မလည်းဒီနေ့ကစပြီး အဲဒီလိုပဲလုပ်တော့မယ်ဟု ထီမထင်ဟန်နဲ့ဖြေမည်။
screen မီးလင်းလာကာ hubby ဟုမှတ်ထားသောနံပါတ်မှဖုန်းခေါ်နေသည်။ ဒါဆို သူအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးသူမအိမ်မှာ မရှိတာသိပြီပေါ့။ ဖုန်းကဆက်တိုက်ခေါ်နေသည်။ သူခေါ်လို့မရအောင် reject list ထဲထည့်ထားပြီးသား။
ဟိုအရင်လက်ထပ်ပြီးကာစက သူမတို့ သိပ်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ယခုလောက် ငွေကြေးအဆင်မပြေသော်လည်း စည်းလုံးနွေးထွေးချစ်ခင်ကြသည်။ ယခုတော့ သူ့စိတ်တွေငွေနောက်လိုက်သွားပြီ။
” ရှင် ဘယ်သူ့အတွက်ရှာနေတာလဲ ကျွန်မတို့အတွက်ဆို အဲလောက်မလိုဘူးနော် ”
” သြော် အလုပ်ဆိုတာ အခွင့်အရေးရတုန်း အကျိုးပေးတုန်း ကြိုးစားရတယ်၊ ကို ရှာတာ မင်းနဲ့ သားသားအတွက်ပဲလေ၊ သားသားအလှည့်ကျရင် ကို တို့လိုမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် university မှာ ကျောင်းထားချင်တယ် ”
” ရှိတာမှ ဒီမိသားစုလေး ၃ ယောက်ရှိတာ ဒီမိသားစုကိုခေါင်းထဲ မထည့်နိုင်လောက်အောင် လောဘတက်မနေပါနဲ့ ”
” အေး ထင်ချင်သလိုသာ ထင်တော့ ”
သူမတို့ စကားနိုင်လု ရန်ဖြစ်ပွဲက စိတ်လာသည်။ တပတ်နေမှ တခါ ညစာ အတူစားဖြစ်သည်။ သူ့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေနောက်ကျတာများကာ အိမ်မှာရှိချိန်တွင်လည်း အလုပ်ကိစဖုန်းတွေက အဆက်မပြတ်။ တိုက်နောက်တလွှာတက်ဖို့ သံမှာမည့် စာရင်း၊ နောက်တလုံးဆောက်လုပ်ခွင့် စည်ပင်တင်ဖို့ စာရွက်စာတမ်း file ပြင်ဆင်၊ သူမ ဆွဲထားသည့် Auto CAD drawing ကို စစ်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရန်ပင် အချိန်မရှိ။ နှစ်နှစ်ခွဲ အရွယ် သားသားက ယောက်ကျားလေးပီပီ သူနဲ့ အကြမ်းပတမ်းဆော့ချင်သည်။
coffee ဆိုင်ကပိတ်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီ။ ဆိုင်မှာလည်း customer က သူမတစ်ယောက်တည်းရှိတော့သည်။ miss call အရေအတွက်ကြည့်လိုက်သည်။ ၁၆ ခု ၊ အိုကေ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်သည်။ သားသားအိပ်ချင်နေလောက်ပြီ။ သားသား အိပ်ခါနီးသောက်သည့်နို့ကို ဟိုကလေးမလေးက သေချာမှဖျော်ပေးပါ့မလားမသိ။ ဆိုင်မှထွက်လာသည့် သူမခြေလှမ်းတို့ သွက်လာသည်။
သြော် တကယ်တော့ သူမဆိုတာ သူမပါပဲလေ။
တောင်ပေါ်သား says: အင်းးးးးးးး
နောက်တစ်ပိုင်း မြန်မြန်လုပ်ကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: ဒီအပိုင်းကတော့ ဒီမှာပဲ ရပ်သွားတာ series လိုက်တော့ လာမယ်လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: Miss calls ၁၆ခုကတော့ တော်တော်ညစ်တယ်ဗျ…။
မတော်.. ဟိုက..ကလေးနဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတခုမှာ.. ဒင်နာသွားစားဖို့ခေါ်နေတာဆို.. ဘယ်နှာလုပ်မလဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: ပထမဆုံး post ရဲ့ ပထမဆုံး comment ရှင် ကို စိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်
တောင်ပေါ်သား says: ပထမဆုံး အစိမ်းခံရလို့ ကျေးကျေးဗျို့ 
kyeemite says: .မနက်က “သူမ” ဆိုတဲ့ပို့စ်တွေ့တယ်…ဘာစာမှမပါ .ခုတော့လည်းဖတ်လို့ကောင်းသားပဲ
Ma Ma says: ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
(ဟိုက..ကလေးနဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတခုမှာ.. ဒင်နာသွားစားဖို့ခေါ်နေတာဆို.. )
ဒီရွာရဲ့ အနှစ်သာရက မတူတဲ့အတွေးနဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေပါပဲ။
အကြိုက်ချင်းတော့ တူပါမလား မသိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ကောင်းဒယ် … အဲဒလို လေး ပညာပြန်ပေးလိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: အဲဒါဆိုလည်း သူကြီးရယ် အဲဒီနေ့အတွက် အကုန်လုံးကန့်လန့်တိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားတာမို့ ပိုကျေနပ်စရာပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: ကန့်လန့်အတိုက်ကောင်းလို့ ဟိုက စိတ်ထိခိယက်ပြီး နောက်မီးမ ယူသွားမှဖြင့် ကွယ်….
chate chate says: ဟုတ် ကိုဖားသက်ပြင်း နောက်မီးမယူ မယူ က ခဏထားလိုက်ပါအုံးမယ် လောလောဆယ် အဲလိုကန့်လန့်တိုက်လို့ စိတ်ထိခိယက်တတ်ရင်ကောင်းမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: comment တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုတောင်ပေါ်သား ၊ ကိုkai ၊ ကိုကြီးမိုက် ၊ မ မမ နဲ့ မလရိပ်
မြန်မာပြည်မှာ ယောက်ကျားတွေအတွက် အိမ်နဲ့ စိတ်ဆိုးရင် ထွက်ပေါက်ပေးစရာနေရာရှိတယ်။ အရက်ဆိုင်သွားထိုင်မလား KTV သီချင်းသွားဆိုမလား တယောက်တည်းသွားလည်း တင့်တယ်တယ်။ မိန်းမတွေကျ အဲလိုမျိုးနေရာမရှိဘူး negative view တွေနဲ့ ကြည့်ကြတာများပါတယ်။
kyeemite says: .မေ့သွားလို့နော…ရွာသူအသစ်လေးကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: စာရေးကောင်းတာ သတိပြုမိတယ်ဗျ။
အထူးသဖြင့်. . . ဒီလိုစကားပြေအရေးအသားမျိုး . . .
နာမည်ကြီး ဝါရင့်စာရေးဆရာမတစ်ယောက် ရေးထားသလိုမျိုးကို ပြေပြစ်ချောမောပြီး
ဖတ်ရတာ သွက်နေတာ. . .
ဆက်ရေးမှာတွေ စောင့် ဖတ်နေမယ်ဗျ
surmi says: ခက်စ်တယ်ကွယ်
အလုပ်ကျိုးစားပြီး မရှုပ်မပွေတဲ့ယောက်ကျားကိုများ အရွဲ့တိုက်ရတယ်လို့ကွယ် ……
တခါတလေ လောကကြီးနယ် မတရားသလားထင်ရတယ်
အင်းးးးးးးးးး ကျုပ်လည်း အိမ်ပြန်ဦးမှပါလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အရေးကောင်းကလေးတော့…
အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ဘ၀မှာ အဲသလိုပဲ ကိုယ့်အလိုထက် ခင်ပွန်းနဲ့ သားသမီးတွက် ဦးစားပေးလိုက်ရတာလေ့ ရှိတာပါပဲ။
သည်းမခံချင်ရင် အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်နိုင်ပါသည်။ :D
ကထူးဆန်း says: အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်ဖို့ နောက်ကျသွားပြီလေ အန်တီဒုံ..
padonmar says: ပျောက်ချက်သားကောင်းတဲ့ ကထူးဆန်းဂျီး
အော်မေ့ဂိုဏ်းကလည်း ရှောင်လင်ဂိုဏ်းက ဦးကျောက် ရွာထဲရောက်လာကတည်းက နှင်းကိုလည်း ဆွဲထုတ်သွား၊ကျန်တဲ့ ရွာသားတွေကိုလည်း မြှောက်ပေးဆိုတော့ ဂိုဏ်းသူအတော် လျော့နေပြီ။
ဒါ့ကြောင့် ရမိရရာ စည်းရုံးလိုက်မိတာ ခွေးလွှတ်ပါ။
chate chate says: ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ရွာအထဲကို မ၀င်ဖြစ်ပေမယ့် ရွာအပြင်က လှည့်ပတ်လျှောက်နေတာတော့ နှစ်ပေါက်နေပါပြီ အပြန်အလှန် devate ပြောတာလေးတွေ သဘောကျလို့ပါ။ အခုမှ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ၀င်လာဖြစ်ရင်း post တင်ဖြစ်သွားတာပါ။
Ma Ei says: ဟိုးရှေးရှေး တုံးကပေါ့နော်…
အဲ့လိုနဲ့ ဆူးလေဘုရား တနင်္ဂနွေဒေါင့်မှာ တစ်ညနေလုံး ထိုင်နေခဲ့ဘူးတယ်…
တောင်ပေါ်သား says: ဟဲ ဟဲ
အမအိ ရေးကြည့်ပါလားဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: စာရေးအတော်ကောင်းသကွီ။
မမဂျီး ကတော့ ဒီလို တွေးတယ်။
ကိုယ့် ပါတနာကို စိတ်တိုင်းမကျတာ ….
သူ့ဘက်က ဒါတွေကို ကိုယ်မမြင်အောင် ဖုံးဖိ ဖို့ထိ မပါးနပ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။
သူ့ကိုသူ့ ပါဖက် ဖြစ်အောင် နေပြတတ်တဲ့ လူမျိုးက ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လေ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကို မတွေ့ရလေ ကြောက်စရာကောင်းလေပဲ။
စီးပွါးရှာလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတာမျိုးတော့ ကျ စမ်းပါစေ။
အပြင် ဆော်နဲ့ချိန်းပြီးမှ စောပြန်လာတာမျိုးထက်တော့ ကောင်းတာပေါ့ကွီ။
ခါတလေ အမျိုးသမီးတွေထင်ရာလုပ်တဲ့ ကိစ္စမှာ နိုင်ငံလုံခြုံရင် တခြားအမျိုးသားတွေ ပြည့်ဝရင် တော်ရဲ့။
နို့မို့ အန်ဒရယ် ရှိသကွယ်။
chate chate says: ဟုတ်ကဲ့ပါ မမဂျီး နိုင်ငံအနေအထားကြောင့် coffee ဆိုင်လောက်ထိုင်ဖြစ်တာပါ။ နိုင်ငံသာ လုံခြုံရင် ၁၉ လမ်းမှာ တညလုံးသွားဝုန်းပစ်ချင်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ၁၉လမ်းမှာ ပုန်းချင်ရင်ဖြင့် ရွာထဲက အရက်သမားသမ္မဂ္ဂကို ခေါ်သွားဘာကွီ…..။ သူရို့ဆူတာနဲ့ တစ်လမ်းလုံး ဘယ်သူမှ မနေနိုင်လို့….လုံခြုံပါလိမ့်မယ်….။
အဲ့…ဘယ်လိုက ဘယ်လို ၁၉လမ်းရောက်သွားတယ် မသိ….
အလုပ်တစ်ခုဝင်၊ အဲ့ဒီထဲ စိတ်နှစ်…၊ အလုပ်တွေရှာကြံလုပ်…၊ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင် ရွာပေါ်တက်…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: မနေ့ကတင် တရားနာခဲ့ရတာ.. အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်ဘက်က အကုန်လျှော့ရသတတ်… ငါ့ညီမ သေချာစဉ်းစားပါတဲ့… ခု စာကိုဖတ်ပြီးတော့လည်း ဘာကို စဉ်းစားမှန်းမသိ ဖြစ်သွားပြီ… နောက်အပိုင်းတွေ ဆက်ပါဦးလို့..
chate chate says: လုံမလေးမွန်မွန်ရေ အကောင်းအဆိုးဆိုတာကတော့ ဒွန်တွဲနေတာပါပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိသလို မိသားစုဘ၀ရဲ့ သာယာပျော်ရွှင်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အရမ်းကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့ :P